KOLONELY CHARLES DESIRE : “Aoka izay ny fanaratsiana ny sampandraharaha mpamonjy voina”
Tao ho ao dia mavaivay ny fanakianana mahery vaika mahazo ny mpiasan’ny sampandraharaha mpamonjy voina eo anivon’ny Kaominina, manoloana ireo trangana haintrano maro izay nifanesy, teto Toamasina. 12 janvier 2017
Teboka telo no azo amintinana ny fanakianana mahazo ireto mpiasan’ny mpamonjy voina ireto.
Voalohany amin’ny fanakianana mahazo azy ireo ny voalaza fa tsy fahaiza-miasa, ny fahatarana amin’ny famonjena voina ary ny tandrevaka. Voalaza amin’ity teboka farany ity ny tsy fisian’ny rano rehefa mamonjy ny hain-trano. Eo anatrehan’ireo resabe ireo dia nivoaka tao anatin’ny fahanginana ny tompon’ andraikitra voalohany ao amin’ny sampandraharaha mpamonjy voina eo anivon’ny Kaominina, ny Kolonely Charles Désiré.
Nambaran’ity farany fa : “endrika fanaratsiana sy fanosorom-potaka avokoa ny resaka ezahina afafy etsy sy eroa, manaratsy ny fomba fiasan’ny mpamonjy voina”. Nahitsiny io resabe io fa : “tsy mpanao tantara tsangana ny mpamonjy voina rehefa mivoaka mamonjy voina fa tena vonona ny hifehy izany voina izany. Ampy hatrany ny rano entina manatanteraka ny fifehezana ny afo, ary ampy ihany koa ny fiara entina miasa”.
Manamafy ity manam-boninahitra ambony ity fa : “Vokatry ny tsy fitandremana avokoa no nahatonga ny hain-trano mitranga eto Toamasina ary tsy misy idiran’ny Jirana na koa fifampikasohan’ny herinaratra fa tandrevaka avokoa ny loza mitranga, ohatra amin’izany ny fandorana fako, afon-dabozia, afo tsy maty teo ambony fatana. Ny andro rahateo mafana sy be rivotra manamora ny firedahan’ny afo hihinana ny trano”. “Aaoka izay ny fanaratsiana atao amin’ny mpiasan’ny mpamonjy voina eo anivon’ny Kaominina”, hoy izy namarana ny teniny.
Manoloana izany, miantso ny fifanomezan-tanana sy ny fiaraha-miasa amin’ny rehetra ny mpiasan’ny mpamonjy voina, mba tsy hisian’ny fanilihana andraikitra na fifanomezan-tsiny.